Khayraadka Aadanaha - Kooxda Huaihai Holding
Siyaasadda kheyraadka aadanaha
Huaihai International Development Corporation waa qayb ka mid ah Huaihai Holding Group.Shirkaddayadu waxay ku taal Xuzhou Dhaqaalaha iyo Horumarinta Farsamada (Heerka Qaranka) Huaihai Zongshen Warshadaha.Waxaan nahay shirkad caalami ah oo ku takhasusay horumarinta iyo cilmi baarista, wax soo saarka, iibinta iyo kanaalka shabakada ee mootooyinka, gawaarida korontada iyo qalabka.Badeecadahayaga waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 60 waddan iyo gobollo sida Afrika, Aasiya, iyo Koonfur Afrika, iyada oo sannadkii la dhoofiyo USD 50 milyan.Shirkaddayadu waxay u hoggaansantaa "suunka, hal waddo, horumarinta dibadda" istiraatiijiyadda, shirkadeena waxay qaadataa sumad madax-bannaan iyo dariiqo iib oo qumman oo faa'iidooyin tartan ah.2-3 sano ee soo socota, waxaan dhisi doonaa 3-5 saldhig wax soo saar iyo in ka badan 10 xafiis si ay u noqdaan ganacsi halbeeg u ah Shiinaha.
Mawduuca nabadda iyo horumarka, dunidu waxay noqonaysaa mid aad ugu tartanta dhaqaalaha iyo sayniska iyo tignoolajiyada.Jawiga suuqa dhaqaalaha ee qaan-gaadhka ah, tartanka caalamiga ah ee u dhexeeya ganacsiyada, falanqaynta ugu dambeysa waa tartanka xigmadda aadanaha, waa tayada tayada iyo horumarinta shaqaalaha iyo heerka maaraynta ee shaqaalaha.Kartidu waa aasaaska ganacsiga, waa kheyraadka ugu qaalisan iyo go'aaminta badbaadada iyo horumarka ganacsiga.Shirkado kasta oo si xawli ah u horumaraya oo si firfircoon uga qayb qaadanaya tartanka caalamiga ah waa in ay xooga saaraan agabkooda kobcinta dhaqaalaha si ay u maamulaan wax ku ool ah iyo horumarinta ilaha dadka iyo xogta.
Maamulka kheyraadka aadanaha ee Huaihai wuxuu u hoggaansamaa fikradda dhaqaalaha suuqa wuxuuna bixiyaa dammaanad horumarinta degdegga ah ee Huaihai.
Please send your CV to huaihaihaiwai@126.com
Maareeyaha ganacsiga dibadda
Iyadoo in ka badan 3 sano oo waayo-aragnimo shaqo ah iibka ganacsiga, yaqaan habka ganacsiga ganacsiga shisheeye
Ruuxa wadashaqeyn kooxeed oo heer sare ah, karti waxbarasho oo xoogan, shahaado jaamacadeed ama wixii ka sareeya, ka qalin jabiyay Ingiriis major, takhasus ganacsi caalami ah, suuqgeyn weyn ama maamulka ganacsiga oo weyn.
CET6 ama ka sareeya.
Hawlgallada e-ganacsiga ee xuduud-dhaafka ah
Aqoon u leh jawiga shaqada iyo xeerarka ganacsiga ee goobta ganacsiga ee shirkadda.
Aad u yaqaan sharciyada jilicsan, isku xirka sarrifka, xayeysiinta iimaylka, xayeysiinta SNS, xayeysiinta BBS iyo hababka kale ee xayaysiinta.
Ku qalabaysan aqoonta aasaasiga ah ee Ingiriisiga.
Ugu yaraan 3 sano oo waayo-aragnimo ah adeegga iibka kadib ee ganacsiga shisheeye.
Shahaado jaamacadeed ama ka sare, oo la qabsanaysa xaaladaha shaqo ee muddada dheer ee dibadda.
Ugu yaraan 3 sano oo waayo-aragnimo ah maaraynta agabka ee warshadaha ganacsiga shisheeye.
Shahaado jaamacadeed ama ka sareeya, oo lagu qalabeeyay xirfado yar oo qoraal ah.
Dukumentiyada iyo arrimaha kharashka
Ugu yaraan 3 sano oo waayo-aragnimo ah dukumentiyada iyo arrimaha kastamka ee shirkadda ganacsiga shisheeye.
Shahaadada koowaad ee jaamacadda ama wixii ka sareeya, ganacsiga caalamiga ah, maamulka ganacsiga, CET4 ama ka sareeya.
In ka badan 3 sano oo khibrad maaliyadeed oo shaqo ah oo ku saabsan farsamada ama warshadaha ganacsiga shisheeye, aqoon u leh maaliyadda caalamiga ah, canshuuraha, iwm.
Shahaado jaamacadeed ama ka sare oo leh takhasuska xisaabaadka iyo maamulka maaliyadda.
Qofka khibradda u leh maaraynta kharashka ayaa la door bidaa.